Waxa Senegal ku dhintay 8 qof kadib is-jiidh-jiidh dhacay intii lagu jiray ciyaar kubadda cagta - Horn Future
Waxa Senegal ku dhintay 8 qof kadib is-jiidh-jiidh dhacay intii lagu jiray ciyaar kubadda cagta
Dakar (Horn Future)-Waxa caasimadda dalka Senegal ee Dakar ku dhintay 8 qof kadib markii uu dhacay is-jiidh-jiidh intii lagu guda jiray ciyaar kubadda cagta ah kaas oo uu sababay gacan ka hadal dhexmaray taageerayaasha labadan kooxood ee ciyaartu u dhaxeeysay kadib markii uu soo dumay xayn-daab ku yaalay gegedan ciyaaraha.
Wasiirka ciyaaraha dalka Senegal Ba Matar ayaa u sheegay warbaahinta in ugu yaraan 8 qof ay dhinteen shalay sababo la xidhiidha is-jiidh-jiidh ka dhacay gegeda ciyaaraha ee kubada cagta ee( Demba Diop stadium) ee caasimadda Dakar intii ay socotay ciyaar u dhaxeeysay laba kooxood oo ka jira gudaha dalka.
Waxa wasiirku uu cadeeyay in maramo u dhexeeyay taageerayaasha labadan kooxood ee kala ah ah (Ouakam iyo Stade de Mbour) uu ka bilowday gegeda ciyaaraha,halkaas oo ciidamada amaanku ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeeysiiysa si ay u kala eryaan taageerayaashan,taasoo keentay in argagax natiijada ka dhalatay ay sababtay dhibanayaashan ku dhintay.
Waxa xusid mudan in dhacdooyinka dilaaga ah ee ka dhasha ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Afrika ay tahay wax caadi ah iyada oo ay sabab u tahay heerarka ammaanka oo aad u liita.
Waxa ugu yaraan ku dhintay 17 qof halka tobonaan kale ay ku dhaawacmeen is-jiidh-jiidh dhacay intii lagu guda jiray kulan ciyaareed ku saabsan kubada cagta ka dhacay Angola bishii February ee lasoo dhaafay kadib markii boqolaal taageerayaal ah ay xoog ku galeen gegeda ciyaaraha.
« Muslimiinta Rohingya oo u sheegay warbaahinta caalamka xadgudubyada taliska Myanmar	» Dib u milicso sida ay wax u dhaceen habeenkii afgambiga guul-daraystay uu ka dhacay Turkey